Izincwadi eziyi-8 ukubeka ukunambitheka okuhle futhi okumnandi emlonyeni wakho | Izincwadi Zamanje
Izincwadi eziyi-8 zokufaka ukunambitheka okuhle futhi okumnandi emlonyeni wakho
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Amabhuku, I-Novela, Inoveli yezothando
Asizisusanga izinkinga, kepha kuzofanele sikwenze thola ukunambitheka okuhle emuva noma yini. I- izincwadi bayindlela enhle yokuyithola. Lokhu ukukhetha kwe Iziqu ezingama-8 —Kusukela kokudala kuya kwabathengisa kakhulu bakamuva— lapho ukunambitheka okunoshukela noma okunosawoti kuvela ezindabeni zabo.
1 Umpheki kaCastamar - uJuan M. Núñez
2 Indlu Chocolate - Maria Nikolai
3 I-Violet Craving - UMartine Bailey
4 Isinkwa selamula nezimbewu ze-poppy - uCristina Campos
5 Njengamanzi kashokoledi - uLaura Esquivel
6 Phakathi kothuli nesinamoni - u-Eli Brown
7 Amakota amahlanu Olintshi - uJoanne Harris
8 Ikhekhe le-almond ngothando - u-Ángela Vallvey
Umpheki kaCastamar - UJuan M. Núñez
Siqala ngale ndaba ebekwe eSpain ye 1720 ngezithako zohlobo: uchuku, uthando, umona, izimfihlo namanga. Izinkanyezi Clara, intombazane encane yomusa, ehlushwa yi agoraphobia kwazise washonelwa nguyise kungazelelwe. Ingabe i- umpheki omuhle futhi ngenxa yalokhu ukwazile ukufinyelela kufayela le- UDuchy waseCastamar.
Lapho kucasula ubukhona obuzolile futhi obungenandaba boku UDon Diego, uMbusi, othe ngemuva kokulahlekelwa ngumkakhe engozini, uhlala yedwa futhi eyedwa ezungezwe yisevisi. Kepha uClara uzothola maduzane ukuthi lokhu kuzola kungenzeka kuqhume.
Kwavele kwaba serie ithelevishini ye Izahluko eziyi-8 yenziwe yi-A3Media futhi iqala ukukhonjiswa kule nyanga.
Isithabathaba sikashokoleti - UMaria Nikolai
Enye yezinto zakamuva kakhulu okuhamba phambili iphumelele kakhulu ebhalwe ngulo mbhali waseJalimane we inoveli yomlando wothando.
Kutholakala ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX ku Stuttgart, ine-protagonist UJudith Rothmann, ndodakazi yomuntu ochumayo umenzi kashokoledi. Umiselwe ukwenza umshado omuhle futhi abe nezingane ezizothola ifa lakhe, uzoba nezinye izifiso, njengalezo hlala esikhundleni kubalulekile enkampanini. Futhi, ukushada ngaphandle kokuthandana akuyona ingxenye yezinhlelo zabo.
Ngesikhathi esifanayo, umama wakhe, uHélène, ukhululekile futhi unothando, wenza ikhambi lokuphumula eLake Garda futhi lapho uthola ukuthi usenesikhathi shintsha impilo yakho ebuthuntu eJalimane ngumuntu ozimele ngokwengeziwe ku Italia.
Ukufisa ama-violets - UMartine Bailey
Asisuki emabhilidini amakhulu noma ukunambitheka emakhishini kwenye indaba ebekwe kuzo. Nansi isithabathaba somuzi Ihholo laseMawton futhi i-protagonist ibizwa Ibhidi leigh, ukujaha umsizi wompheki, ofuna ukuqala umndeni noJem Burdett futhi avule eyakhe indawo yokucima ukoma. Kepha nini mnumzane geoffrey, inkosi yakhe endala, ishada nentsha futhi iyindida Lady carinna, I-Biddy ibandakanyeka kuwebhu yezingxabano, izimfihlo namanga, futhi nohambo oluya e-Italy phakathi.
Isinkwa selamula ngezimbewu ze-poppy - UCristina Campos
Kube yimpumelelo enkulu yezincwadi ngisho nomqondisi UBenito Zambrano uthathe izintambo ze- inguqulo yefilimu, Wabuye wadutshulwa eMallorca, lapho kwenzeka khona lesi sakhiwo. Lapho, edolobheni elincane elisenkabeni U-Anna noMarina, ezimbili odade behlukaniswe ebusheni babo, bahlangana futhi ukuthengisa i- I-Bakery abazuze njengefa kusuka owesifazane ongaqondakali abacabanga ukuthi abamazi. Ngabe izimpilo ezihluke kakhulu Futhi ngenkathi u-Anna esanda kusuka esiqhingini futhi esashade nendoda angasayithandi, uMarina uhamba umhlaba wonke ngomsebenzi wakhe kwi-NGO.
Njengamanzi woShokoledi - ULaura Esquivel
Un Classic nakulesi sihloko sikaLaura Esquivel, futhi nenguqulo yayo ehambelanayo yebhayisikobho, esishiyile - futhi esaqhubeka nokushiya - ukunambitheka okuhle kakhulu. Lowo ophethe ushokoledi nalowo ophethe i- Indaba yothando engenakwenzeka okubalayo phakathi UTita, i-protagonist, futhi Pedro. Masikhumbule ukuthi kukhona iresiphi esahlukweni ngasinye nomlingo omningi.
Phakathi kothuli nesinamoni - U-Eli Brown
IPirates nokudla. Yini enambitheka kakhulu kunale nhlanganisela? Isethwe ngo-1819, ikhuluma ngendaba ye- Owen wedgwood, umpheki owaziwayo owaziwa ngo "the Caesar of Sauces", othunjwa yiqembu labaphangi eliholwa ngowesifazane, UCaptain Hannah Mabbot. Uzokwazisa ukuthi ungasindiswa kuphela uma njalo ngeSonto, nakanjani ekuphakela ukudla okumnandi.
Amakota amahlanu ewolintshi - UJoanne Harris
UHarris futhi ungumbhali we chocolate, ngakho-ke qhubeka ungeza ukunambitheka ngalesi sihloko ukuthi izinkanyezi UFramboise, owesifazane okhumbula ukunambitheka nemizwa yakhe ebuntwaneni eFrance, phakathi kobunzima bempi, futhi ikakhulukazi nge umcimbi lokho kwaphawula ikusasa lempilo yakhe nelomndeni wakhe. Kakade ekuvuthweni, uFramboise kuzofanele abhekane nalokhu okwedlule.
Ikhekhe le-almond ngothando - U-Angela Vallvey
Sishiya okwedlule bese sigcina okwamanje ngale ndaba ka-Angela Vallvey ogama lakhe lingu-protagonist Fiona, intokazi, intandane kamama, onakekela ubaba wakhe ogulayo futhi ongakwazi ukupheka. Nge izinkinga futhi ne ukudla okungeyona impilo futhi iphekiwe, iyazi ukuthi iyini amar. Ubethandana impilo yakhe yonke no-Alberto, osanda kubuyela edolobheni. Okubi wukuthi useqalile ukuthandana noLylla, leso sitha esihle kunazo zonke esinaso. Kodwa-ke uthisha wesikole sikaFiona ummemela esidlweni sasemini ngolunye usuku futhi amazise kubabekazi wakhe uMirna, umpheki wakudala. Futhi konke kuzoshintsha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Izincwadi eziyi-8 zokufaka ukunambitheka okuhle futhi okumnandi emlonyeni wakho
Izincwadi ezihamba phambili zika-Isabel Allende
Izincwadi ezihamba phambili zikaPérez-Reverte